Cambaareyn caalami ah oo laga soo saaray gabadhii lagu dilay Gaalkacyo - Latest News Updates
Cambaareyn caalami ah oo laga soo saaray gabadhii lagu dilay Gaalkacyo
War qoraal ah oo kasoo baxay Xafiiska hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan maalgelinta dad weynaha ee UNFPA, ayaa lagu cambaareeyay tacaddiyadii loo geysta Caa’isha Ilyaas Aaden, oo ahayd 12 Jir , dhowaan lagu dilay magaalada Gaalkacyo.
Hay’adda ayaa sheegtay in ay si weyn ugu xumaadeen falka lagula kacay Gabadha yar ee la kufsaday mis-na sida arxan darrada ah loo dilay.
Qoraalka ayaa lagu yiri” Hay’adda Caalamiga ah ee UNFPA, iyada oo gudaneysa mas’uuliyadda ka saaran xakamaynta tacaddiyada ka dhanka ah Haweenka iyo Gabdhaha, waxaa ay cambaareyn xooggan dusha uga tuurtay falka waxash-nimada ah ee lagula kacay Caa’isha yar.
Falalka ku salaysan Jinsiga ee lagula kaca Haweenka ayeey ku tilmaantay in uu yahay mid xad-gudub daran ku ah xuquuqda Haweenka iyo Gabdhaha, taas oo ay tusaale xun u tahay dilka iyo kufsiga lagula kacay Caa’isha yar, ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay UNFPA.
“UNFPA waxaa ay Garab taagan tahay Qoyska Caa’isha, waxaa ayna si buuxda u taageeraysaa Bulshooyinka iyo Dadka u dhaqdhaqaaqa la dagaallanka shaqaaqooyinka ku salaysan jinsiga iyo xuquuqda Haweenka iyo midda aadanaha ee Soomaaliya” ayaa sidoo kale lagu yiro Qoraalka.
Hay’adda UNFPA, ayaa ugu dambayn ku baaqday in baaritaan deg-deg ah lagu sameeyo dilka Caa’isha iyo in Puntland laga hirgeliyo xeerka dembiyada galmada.
Waxanay ku baaqday in Maanta iyo mar kastaba loo istaago dhowrista xuquuqda Aadanaha, amniga iyo ilaalinta sharafta Haweenka meel kasta oo ay joogaan.